Delta Engineering ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme
Mụtakwuo banyere anyị na ụlọ ọrụ anyị
Delta Injinịa ka tọrọ ntọala na 1992 site na Danny De Bruyn na Rudy Lemeire, ndị injinia abụọ ndị na-arụ ọrụ na mmepụta ọkpọ.
N’ịhụta enweghi ngwa igwe ọfụma na-arụ ọrụ nke ọma, ha bidoro n’ichepụta ma mepụta UDK100, otu onye na-anwale isi onwe ya.
N'ime ọnwa na afọ ndị sochirinụ, ha nọrọ nnọọ na-elebara mkpa nke ndị ahịa ha anya, na-eduga ngwa ngwa mmepe nke ụdị ụzọ kachasị edozi nsogbu ndị ụlọ ọrụ taa.
Usoro aka a mere Delta Engineering iji guzobe ọmarịcha ọnọdụ na ụlọ ọrụ ahụ. Taa Delta Engineering na-agụta nnukwu ìgwè dị iche iche, yana obere ụlọ ọrụ nwere onwe ha pere mpe n'etiti ndị ahịa ya.
Ọ bụ ebumnuche anyị ịzụlite usoro dị mkpa iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ike iche onwe ha na ndị ọzọ. Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ, ọrụ, ihe nkwakọ ngwaahịa na ụgwọ ụgbọ njem bụ nke ndị KPI anyị mgbe ha na-echepụta igwe na usoro ọhụụ.
Kedụ ka anyị si amata ogo ngwaahịa anyị? Site na imekọ ihe ọnụ, onye ahịa anyị: nzaghachi dị oke mkpa na-enye anyị ohere idozi ma melite ngwaahịa anyị. Ihe di nkpa maka oganihu anyi: ndi mmadu n’etinye aka na ike ha. Ebumnuche anyị bụ iji nweta afọ ojuju ndị ahịa site n’ịzụ oke n’ichepụta ụdị dị mma, nke ga-adị ọnụ ahịa, imepụta, nrụnye na mgbe ahịa gafere. Site n'ọdịnala anyị, mbanye na nka onye ọ bụla na-arụ, anyị nwere ọnọdụ iche iche ịchọrọ ndị ahịa anyị gburugburu ụwa.